जनप्रतिनिधि Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperजनप्रतिनिधि Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
निर्वाचन कसुरमा कस्तो सजाय हुन सक्छ ?
निर्वाचनमा कानुनविपरीत काम गर्ने र अपराध गर्नेलाई सजायको समेत व्यवस्था छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने त्यस्ता क्रियाकलापमा कसुरको गम्भीरता हेरी सजायको व्यवस्थासमेत छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय)ऐन २०७३ मा भएका व्यवस्थाहरु : १. झुटा विवरण पेस गर्न नहुने : उम्मेदवारी मनोनयनका बेलामा झुटा विवरण र कागजात पेस गर्न नहुने नियम छ […]
मतदाता परिचय हरायो भने भोट दिन पाइँदैन ?
आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा देशभरिका मतदाताले मतदान गर्न पाउन अब २३ दिन बाँकी छ । वैशाख ३० गते देशैभरि एकै चरणमा हुन लागेको चुनावका लागि त्यसको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना महिला, ८९ लाख […]
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तीन महानगरपालिकामा मात्रै मेयरको उम्मेद्वार उठाउने भएकाे छ । पाँच दलीय गठबन्धनबीच भागबन्डा मिलाउँदा कांग्रेसको भागमा काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका परेको हो । जहाँ यसले मेयरका लागि मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछ । त्यस्तै तीन उपमेयरका लागि उम्मेदवारी दिन पाउनेछ । वीरगञ्ज, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसको भागमा उपमेयर परेको छ । यस […]
यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदको लागि उम्मेदवार हुन चाहेमा उसमा केही योग्यता हुन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न के कस्ता योग्यता चाहिन्छ भन्ने ‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८’ मा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकाका अनुसार […]
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले अब जनप्रतिनिधिको कार्यकाल करिब दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका महिला जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूको चार वर्ष सिकाइमै बितेको बताएका छन् । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भानमती बानियाँले पदीय जिम्मेवारीबारे जानकारी नपाएरै कार्यकाल सकिन लागेको […]